Koox Xagjiriin Doonayay in ay weeraraan Masaajid oo gacanta lagu dhigay | Dhexnimo Media
Home Wararka Koox Xagjiriin Doonayay in ay weeraraan Masaajid oo gacanta lagu dhigay
Koox Xagjiriin Doonayay in ay weeraraan Masaajid oo gacanta lagu dhigay
Ciidamada booliiska dalka Jaramlka ayaa xiray kooxo cunsuriyiin xagjir ah oo qorsheenayay in ay weeraraan masjid kuyaala dalka Jarmalka, waxaana booliiska heleen xog ku aadan weerarka ay kooxdan qorsheenayeen.
Cunsuriyiinta la xiray oo gaaraya 12 qof ayaa waxay ka tirsan yihiin koox lagu magacaabo Der harte Kern, waxa ayna kooxdan qorsheeyeen in ay weeraraan masaajid iyo sidoo kale dadka magan galyo doonka ah ee jooga gudaha Jarmalka.
Booliiska dalka Jarmalka ayaa sidoo kale baadi goob ugu jira xubno kale oo kooxdan kamid ah qeybna ka ahaa qorshaha weerarka masjidka iyo sidoo kale dadka magan galyo doonka ah ee jooga Jarmalka.
Dalka Jarmalka waxaa ku sugan kooxaha cansuriyiinta midigta fog, waxa ayna kooxahan abaabulaan weeraro ka dhan ah dadka Muslimiinta ah iyo sidoo kale dadka kale ee Jarmalka u yimaada in magan galyo ka helaan.
Previous articleYaab: Xoriyada la siiyey haweenka Sacuudiga oo horseeday in qaarkood dariiqyada ku cabaan Sigaarka
Next articleQodob kamid ah Heshiis hoose ay wada gaadheen Isra’il iyo Sudan oo Hirgalay